फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - रामराज्य र अपराध नियन्त्रण सप्ताह : प्रदीप पन्त
रामराज्य र अपराध नियन्त्रण सप्ताह : प्रदीप पन्त अनुवाद
(प्रदीप पन्त हिन्दी साहित्यका होनहार व्यङ्ग्यकार हुन् । सन् १९४१ मा भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मेका पन्त पेसाले पत्रकार रहे । ‘मै गुट निरपेक्ष हुँ’, ‘प्राइवेट सेक्टरका व्यङ्ग्यकार’ लगायत अन्य व्यङ्ग्यात्मक कृतिका अतिरिक्त केही उपन्यास र कथा सङ्ग्रहका सर्जक पन्तका व्यङ्ग्यमा समाजका धमिराहरूलाई तिल्मिल्याउने अद्भूत क्षमता पाइन्छ । साम्प्रदायिकता, शोषण, छल, छद्म, भ्रष्टाचार तथा दूराचारप्रति सन्सनाउँदा तीर हान्ने पन्त विभिन्न भेषका राजनीतिका नाममा देखिने चरित्रहीन चरित्रमाथि पनि त्यत्तिकै जाइलाग्छन् । ‘समाज कल्याण’ पत्रिकाका सम्पादक रहेका पन्त विभिन्न भारतीय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् भने उनको ‘महामहिम’ नामक उपन्यास विशेष चर्चित छ । –अनुवादक)
मलाई अहिले पनि कम्पन छुटिरहेको छ, मुटु कामिरहेको छ । दुई दिन अगाडिको घटना हो– एकाबिहानै कसैले घरको ढोका ढक्ढक्यायो । मैले ढोका खोलेँ– सामुन्ने उपस्थित थिए डी.एस.पी. दामोदर रिसाल । म केही पछि हटेँ । तर उनी अघि बढ्दै भने– “नडराउनुहोस्, म तपाईंकै सहयोगका लागि उपस्थित भएको हूँ ।”
मैले आँखा मिचेँ कतै म सपनामा त छैन भनेर । तर त्यो यथार्थ नै थियो । “तपाईं जे.एस.पी. रिसाल होइन ?” मैले सोधेँ ।
“हो ।” उनले मप्रति शाही शासनका मन्त्रीहरू तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सामु झुकेझैँ झुक्दै भने– “तपाईंहरूको सेवा गर्नु त हाम्रो परमधर्म हो ।”
“यो के भन्दै हुनुहुन्छ डी.पी. साहेव तपाईं ?” मैले भनेँ । उनले पुनः विनम्रतापूर्वक भने– “जनताको सेवा गर्नु त हामी प्रहरी गणको महान् कर्तव्य हो नि !”
“आज तपाईं किन यति विनम्र हुनुहुन्छ रिसालज्यू ?” मैले भएभरको साहस निकालेर सोधेँ ।
“कुरा यस्तो छ !” डी.पी. भन्दै गए– “यो हप्ता हामी प्रहरी दिवसअन्तर्गत अपराध नियन्त्रण सप्ताह मनाउदैछौँ । त्यसैले यो हप्ता हामीले विनम्र हुनैपर्छ । तीन वर्ष पहिला पनि हामीले यस्तो दिवस मनाएका थियौँ र त्यतिबेला पनि हामी यस्तै विनम्र भएका थियौँ । अहिले मात्र विनम्र भएका हौँ र ?”
मैले पुनः साहस गरेर सोधेँ– “तपाईंहरू हरेक साल किन यो सप्ताह मनाउनुहुन्न त ?”
“नियम त हरेक साल मनाउने नै हो । तर हामी त प्रहरी हौँ ! यदि हरेक साल यस्तो दिवस मनाइयो भने त कतै वास्तविक रूपमै अपराध नियन्त्रणमा आउन सक्छ । तब.... तब हाम्रो अस्तित्व समाजमा कहाँनेर रहन्छ ?”
“कत्रो दूरदर्शी सोच तपाईंहरूको !” मैले उनलाई बधाई दिएँ ।
उनी निकै मुस्कुराए ।
मैले पुनः साहस गरी उनलाई सोधेँ– “आउनुहोस्, बस्नुहोस् ।”
“ठीकै छ ।” उनले भने– “तपाईंलाई चोर डाका, पकेटमार र गुण्डाहरूले सताउने गरेका छन् भने भन्नुहोस् ।”
“तपाईंको कृपाले हैन ।” मेरो जवाफ यस्तो थियो ।
“तपाईंको छेउछाउमा कुनै अपराधिक कृयाकलापका संलग्नहरू कोही छन् भने बताउनुहोस् हामीलाई अपराधको निराकरण गर्न तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ ।” डि.एस.पी. भन्छन्– “जो नेता छ ऊसित महल त हुन्छ नै ।”
अब मेरो आफ्नै स्थिति शाही शासनकालका मन्त्रीकोझैँ भयो । मैले डी.एस.पी. का अगाडि झुक्नुप¥यो ।
मैले अर्कातर्फ ठडिएको अन्तशुल्कका नायवसुब्बाको घरतर्फ ईशारा गर्दै भनो– “तिनको मासिक छ हजार तलवले यो महल कसरी बनियो होला ?”
डी.एस.पी. मुस्कुराए– “छाडिदिनुहोस् । आजकाल तिनको बढुवा भई गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । भोलि हाम्रो जिल्लामा ती सी.डी.ओ. भएर आउन सक्छन् ।”
अब म उनलाई छेउको मिठाई पसलेको घरतिर ईशारा गर्छु– त्यो शुद्ध घीउको बखान गरेर वनस्पति घीउको मिठाइ बनाई बेच्छ । यो सरासर अपराध हो । तपाईं उसलाई गिरफ्तार गर्नुहोस् ।”
“अहँ म उसलाई गिरफ्तार गर्न सक्दिन ।” डी.एस.पी. भन्दै गए– “उसले हामीलाई सधैँ मिठाई ख्वाउँछ र सबै राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिन्छ । उसलाई गिरफ्तार गरियो भने त आन्दोलन उठिहाल्छ नि ।”
म निरुत्तर भएँ ।
डी.एस.पी. हिँडे र हिँड्दाहिँड्दै स्थानीय टुँडिखेलमा आयोजित प्रहरी दिवसअन्तर्गत अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदर्शनीमा उपस्थित हुनका लागि निम्तो पनि दिए ।
म कसरी डी.एस.पी. को अनुरोध लत्याउन सक्थेँ । राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण सप्ताहको दौरानमा सो प्रदर्शनी आयोजित थियो । सारा शहर प्रदर्शनीमा उत्रिएको थियो । त्यहाँ ठूलाठूला प्रहरी अधिकारीहरू जनसेवाका खातिर तम्तयार थिए । मलाई द्रोणप्रसाद आचार्य, बदरीनाथ भट्टराई, पारिजात, युद्धप्रसाद मिश्र तथा त्यस्तै देशभक्तहरूको याद आयो– यदि यस्तो प्रदर्शनी देख्न पाएका भए यो देश रामराज्य नै भएको ठान्दा हुन् । मलाई प्रहरीहरू जनसेवक भएकामा खुशी त लाग्यो नै । मैले एक पुलिस अधिकारीलाई यो सप्ताहअन्तर्गत के के कार्यक्रमहरू राखिएका छन् भनेर सोधेँ ।
“विशेष अपराधको रोकथाम !” उनी स्पष्टीकरण दिँदै गए– “खास कुरो के भने अपराध बढ्दै गएपछि हामी तीनतीन वर्षमा अपराध नियन्त्रण सप्ताह मनाउँछौं । प्रत्येक साल मनायो भने त अपराधहरू नै कम हुन्छन् अझ निर्मूल नै हुँदै जान्छन् । तब केका आधारमा नियन्त्रण सप्ताह मनाउने ? प्रगति विवरणको ग्राफ चार्टमा के भर्ने ? अपराध नियन्त्रण हुनुपर्छ त्यसैले त्यसका लागि अपराध पनि हुनुपर्दछ । हामीले अपराध नियन्त्रण सप्ताह मनाएको औचित्य पनि त पुष्टि हुनुप¥यो ।”
“ठीक हो !” मैले भनो– “तर यो सप्ताहपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ त ?”
“हिं ही हीं हीं.....” हाँस्दै ती प्रहरी अधिकारी उठे । मलाई चित्त बुझ्यो । उनी भन्न थाले– “तपाईंहरूलाई थाहै छ फेरि किन हामीलाई सोध्नुहुन्छ । बाँकी दिन तपाईंहरू झण्डा बोक्नुहुन्छ, हामी डण्डा बोक्छौँ । तपाईंहरू सरकारी गाडी तोड्नुहुन्छ– हामी तपाईंहरूको टाउको तोड्छौँ– तपाईंहरू टायर बाल्नुहुन्छ हामी हवाईफायर गर्छौं ।”
म अगाडि बढेँ । बर्दीका प्रहरीहरू जताततै थिए । केही समयअघि भएको जनआन्दोलनमा प्रहरीहरूले आन्दोलनकारी र निर्दोष बटुवाहरूमाथि गरेको व्यवहार नजिकैबाट देखेको म डराउँदै यताउता गर्दै थिएँ । एक प्रहरी जवानले मलाई रोक्दै भने– “किन यसरी डराएर हिँड्नुभएको ?”
“तपाईंहरूलाई देखेर ।” मैले भनेँ ।
“नडराउनुहोस् ।” उसले भन्यो– “यो अपराध नियन्त्रण सप्ताह हो– यो हप्ताभर हामी सक्कली अपराधीहरूलाई मात्र पक्रन्छौँ– तपाईंहरू जस्तालाई होइन । जानुहोस्, निश्चिन्त भएर प्रदर्शनीको अवलोकन गर्नुहोस् ।”
म अब निश्चिन्त भएर घुम्न थालो– प्रदर्शनीका कक्षमा यो प्रदर्शनीमा प्रहरीहरूका बीचमा घुम्न पाएकामा मलाई आफू भाग्यमानी भएको महसूस भयो । मलाई आफ्नो देशप्रतिको गर्व पुनः हलक्क बढेर आयो । माइकमा ठूलो स्वरमा अवाज आइरहेको थियो– अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर । स्वागतम् मुन्तिर अपराध नियन्त्रण सप्ताह लेखिएका ठूलाठूला व्यानरहरू यत्रतत्र झुण्डिएका थिए । आकाश सफा थियो, धरती हराभरा थियो मलाई लाग्यो अब देशमा रामराज्य सुरु भयो ।
अनुवाद : नीलकमल